Ny amin'ny Chat Roulette - ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny vavy (mitovy ChatRoulette)
Ny amin’ny Chat Roulette — ny lahatsary amin’ny chat miaraka amin’ny vavy (mitovy ChatRoulette)
Na iza na iza te-hiaina new fifandraisana, te-hiresaka amin’ny mahaliana ny lohahevitra, ho namana, hitsena ny ankizivavy, dia tokony hiezaka tsotra sy ny fomba mety ny Mampiaraka an-tserasera — chat roulette. Izany manokana ny harena dia manome fahafahana hahazo ny olona an-tapitrisany maro mpampiasa Aterineto tahaka anao liana amin’ny mahaliana ny fifandraisana, ny fitiavana sy ny finamanana. Ny safidy ny mpiara-mitranga tampoka, mety ho olona avy any USA, Holland, Alemaina, ETAZONIA, ary na dia any Aostralia. Ny lahatsary amin’ny chat miaraka amin’ny ankizivavy manome ry zalahy ny fahafahana hampihatra ny fahaizany miresaka amin’ny tsy mitovy fananahana, ary manana vehivavy sakaizany amin’ny faritra samihafa eto amin’izao tontolo izao.
Amin’ny Chat roulette ny ankizivavy — dia azo antoka mpanampy eo amin’ny fitadiavana ny fahazoana ny ampahany. Ny ny fidirana amin’ny aterineto ny fifandraisana tsy voafetran-tsisintany, dia afaka na iza na iza izay ny solosaina dia fitaovana amin’ny lahatsary fakan-tsary, mikrô, ary ny fitenenana. Raha ny marina dia fitaovana ity dia manome fahafahana anao mivantana lahatsary sy resadresaka. Mba mamaritra anarana dia tsy ilaina, fa nanao ny fanambarana ny mpampiasa ny lahatsary amin’ny chat manome bebe kokoa ny fomba fiasany noho ny tsy mitonona anarana. Mba hanolotra ny tenanao ao amin’ny mazava tsara indrindra, izany no soso-kevitra an-tsoratra kely tonga soa eto amin’ny lahatsary.
Manindry «Manomboka ny fikarohana», anareo hatrany ho tonga mpandray anjara amin’ny rafitra
Ao amin’ny lahatsary amin’ny chat varavarankely hita eo ny mety interlocutor: hitanareo sy renareo ny olona iray, dia mahita sy mandre anao. Raha ny maha-izy azy ny interlocutor toa ianao tsy mahafinaritra na hahaliana, tsindrio «dingana Manaraka» ary mifindra amin’ny vaovao ny olona. Ny lahatsary voalohany amin’ny chat dia fitaovana ho an’ny fikarohana vaovao ny olom-pantatra ho hanitra fisakafoana traikefa. Ny tanjon’ny mampiasa ny asa fanompoana ho an’ny olona tsirairay dia afaka ho azy ireo manokana.
Mba hihaona, mba miresaka, mba hanana fifandraisana ny lahatsary amin’ny chat fotsiny
Aza manahy, raha ny interlocutor tapaka ny resaka voalohany: izany no azo atao mba hahafaly ny olona rehetra. Ny lahatsary amin’ny chat miaraka amin’ny ankizivavy manome fahafahana mifandray amin’ny an’arivony ny olona. Andramo ny mitady namana, milamina, namana, fisainana, hihaino ny interlocutor, ary ianao hihaona olona iray izay tena tia anao. Ho hampahasosotra, aza misalasala mba hifandray voalohany sy ny fiainana ho vaovao mahaliana sy ny mahasoa ho anao
← Maimaim-poana amin'ny chat ao Italia
Maimaim-Poana Mampiaraka - Hihaona →